"10 Fa miendrika Izay anton’ny nanaovana ny zavatra rehetra sady nahariana ny zavatra rehetra, raha mitondra zanaka maro ho any amin’ny voninahitra, ny hahatanteraka ny Tompon’ny famonjena ireo amin’ny fahoriana. 11 Fa iray no nihavian’izy roroa, na Izay manamasina, na izay hamasinina; koa izany no tsy mahamenatra Azy hanao ireo hoe "rahalahy" 12 ka manao hoe: "Hitory ny anaranao amin’ ny rahalahiko Aho; Eo amin’ny fiangonana no hiderako Anao". 13 Ary koa: "Izaho hatoky Azy". Ary indray koa: "Indreto Izaho sy ireo zaza nomen’Andriamanitra Ahy". 14 Koa satria manana nofo aman-drà ny zaza, dia mba nandray izany koa Izy, mba handringanany amin’ny fahafatesana ilay manana ny herin’ny fahafatesana, dia ny devoly, 15 ary mba hanafahany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin’ny fahandevozana noho ny tahotra ny fahafatesana. 16 Fa hita marina fa tsy anjely no vonjeny, fa ny taranak’i Abrahama no vonjeny. 17 Koa amin’izany dia miendrika mba hatao tahaka ny rahalahiny amin’ny zavatra rehetra Izy, mba ho Mpisoronabe mamindra fo sy mahatoky ny amin’Andriamanitra, mba hanaovany fanavotana noho ny heloky ny olona. 18 Fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin’ny fahoriana nentiny, dia mahavonjy izay alaim-panahy koa Izy." Hebreo 2:10-18
Ny fitiavan’i Jesosy. Tsy menatra ny miantso ny olona nandray famonjena ho rahalahiny i Jesosy. Voalaza ao amin’ny Jaona 1:12 fa “Izay rehetra nandray Azy dia nomena hery ho tonga zanak’Andriamanitra”. Zava-dehibe ny iraka nataon’i Jesosy tety an-tany, ataony ahoana tokoa moa no hijery ireo izay nohariany hiara miaina Aminy mandrakizay no ho very mandrakizay. Manao ahoana ny hafaliany miseho eo anatrehan’Andriamanitra miaraka amin’ireo olom-boavonjy? Mampiseho izany fa tena zava-dehibe amin’ny Tompo ny faneken’ny olona iray ny famonjena natolony.
Niova ho olona. Mba ahafahan’ny Tompo mamonjy ny olona ho afaka amin’ny fahotana dia tsy maintsy niova ho olona Izy. Midika izany fa ny zavatra rehetra mahazo ny olona amin’ny maha nofo aman-drà azy dia niainan’Ilay Zanak’Andriamanitra avokoa. Hatramin’ny fahafatesana, mbola mafy lavitra aza no niaretany satria nahantona teo amin’ny hazofijaliana Izy. Izany hoe izay fahoriana heverin’ny olona ho mafy indrindra mety ho lalovana ety ambonin’ny tany dia efa nentin’i Jesosy Kristy. Inona ny fakam-panahy heverinao fa sarotra indridray miady aminy? Efa nolalovan’i Jesosy izany (18). Raha lavo amin’ny fakam-panahy izany izaho sy ianao dia safidy izany satria tsy niambina. Efa vitan’i Jesosy ny fandresena fa ny mihazona izany no anjarantsika.
Saino: “Kanefa amin’izany rehetra izany dia manoatra ohon’ny mpandresy isika amin’ny alalan’Ilay tia Antsika” Rômanina 8:37. Mbola tokony ho resy ve?